June 8, 2021 - Khitalin Media
သမီးက ကလေးရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ KTV က ၁၆ နှစ်မလေး
June 8, 2021 by Khitalin Media
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်​ကြိမ်​ငြင်းဆို​နေတာ​ပေါ့ ! ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း​နေပြန်​တယ်​ ! ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါသေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေ​တော့… ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း …“မီး​လေး​ရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစား​လေ” ..ဆိုပြီးအမြဲ နားပူနားစာလုပ်​​နေတယ်​ ! နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို….မငြင်းသာမလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့သဘောတူလိုက်​တယ် ! ကောင်မလေးက..ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီးရွာကို ခဏ ဆိုပြီးပြန်သွားတာပေါ့ !ဦးလည်း လွမ်းကာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်​ ! နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ ကောင်မလေး ဦးဆီကို ပြန်​ရောက်​လာတယ် ! ကောင်မလေး(ခေါ် )မီးရဲ့ ဘယ်ဘက်​လက်မှာ တစ်​နှစ်အရွယ် ခလေး​လေးတစ်ယောက် ချီပိုးပြီးပါလာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘောစိဦးလေးကြီးကဘယ်သူလဲ ​မေးတာပေါ့ ! … Read more
ဇနကဟောကိန်း ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၀နှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ **တည်** တည်ဆိုတာ သင်္ဘောတည်ဆောက်တာကို ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြံစည်ဆဲ၊ လုပ်ငန်းတွေအစပြုဆဲ … Read more
မိန်းမအပေါ် သစ္စာမရှိသူ၊ ရိုက်နှက်သူ၊ ငွေအသုံးကြမ်းသူ စသည်ဖြင့် မိန်းမဖြစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်သော ယောင်္ကျားတွေရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း သူ့မှာကျွန်မမှ မရှိရင် မဖြစ်ဘူး။ သူက လူတော်ပါ လို့ပတ်ဝန်းကျင်က အမြင်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမြင်မှန်ကို မရချိန်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုပဲ နားချ နားထောင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချစ်ကြောင့်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ယောင်္ကျား ဆိုးနဲ့တွေ့နိုင်ချေရှိသော လက္ခဏာဟာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁. လက်သန်းအောက်ကနေ လက်ညှိုးအထိရှိသောလမ်းကြောင်း ပထမဆုံး လက်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါ။ လက်သန်းအောက်ကနေ လက်ညှိုးအထိသွားသော လက္ခဏာလမ်းကြောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့ မေတ္တာလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပြီး လက္ခဏာပိုင်ရှင်ရဲ့ စိတ်အနေအထား၊ အချစ်ရေးတို့ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ လက္ခဏာကကော ဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ အကယ်၍ မေတ္တာလမ်းကြောင်းဟာ လက်ညှိုးအောက်တွင် အောက်သို့ထိုးကျနေရင်တော့ သင်ဟာ … Read more
အသက်ကြီးရင် အိုဇာတာကောင်း မကောင်းသိနိုင်မယ့် သင့်ဘယ်ဘက်လက်မလေး
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကံတရာကို ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ကြဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်တယ်..။ ဒီကံတရာကိုလည်း ဘုရားကလွဲပြီး ဘယ်သူကမှ ကြိုတင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း လူတိုင်းလက်ခံကြလိမ့်မယ်..။ သို့သော်လည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံတရားကို အနီစပ်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တာဟာ ဗေဒင် နှင့် လက္ခဏာပညာရပ်ပါပဲ…။ အကျွန်နော် တွေ့တဲ့ ပို့လေးတစ်ခုကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ အိုဇာတာ ကောင်းမကောင်း ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ အမှတ်အသားလို့ သိရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ..။ အိုဇာတာ ကောင်းမှာလား မကောင်းဘူးလား ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်သွားဗျ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လက်မရဲ့ အကွေး အစစ် အတွင်းပိုင်းနေရာမှာ လူတိုင်းမှာပါရှိတဲ့ အရေးအကြောင်း လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီအကြောင်းလေးဟာ စပါးစေ့ လို သေး ချွန် ပြီး ပိတ်နေရင် အိုဇာတာ ကောင်းပါတယ် ထိုလူဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ မိမိ ရှာသည်ဖြစ်စေ … Read more
အမျိုးသမီးများတွင် ရှိတတ်သော ထင်ရှားသည့်မှဲ့ (၇)မျိုး အကြောင်း
ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ။ မိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်လို့ မှဲ့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေမှာဆိုကြပါတယ်။ အဓိက မှဲ့တွေပေါ့။ အဲဒီ မှဲ့ (၇)မျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့ …. ရတနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တဲ့မှဲ့ရယ်။ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (ဘယ်ဘက်) မျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီး (ညာရယ်) နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ စံပယ်တင်(ညာဘက်) မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထင်ကရ မှဲ့ (၇)မျိုးရှိတယ်။ ၁-ရတနာရွှေအိုးမှဲ့ အဲဒီမှာ ရင်ဘတ်အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို ၇တနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီမှဲ့ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလေ့ ရှိတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားတတ်တယ်။ နောက်ပြီး သူတို့တွေဟာ အလုပ်ဌာနတွေမှာ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောာင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ … Read more
အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများ အကြောင်း သိပြီးပြီလား
အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများ အကြောင်း သိပြီးပြီလား မြန်မာနိူင်ငံဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုထားရတာ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြန်မာ့အိနြေ္ဒ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ဟန်ပန်တွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရတယ်(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့နဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးအချို့တော့ရှိပါတယ်) ဟိုးအရင်တုန်းက ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ မြန်မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်ပြသွားပီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကျက်သရေကိုကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ့ကိုထိန်းသိမ်းပြသွားတာတွေဒီနေ့ခေတ်မှာတော့….Facebook မှာ like တစ်ခု ရဖို့အရေး…..ရှိသမျှပစ္စည်းတွေ အကုန်ဖော်ပြနေကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး တွေများလာတယ်……သူတို့ပိုစ့်တွေရဲ့ comment တွေကြည့်လိုက်ရင် အယုတ္တအနတ္တစုံလင်နေအောင်ဆဲဆိုနေကြတဲ့အဆဲ comment တွေကို အဟုတ်မှတ်ပီးသာယာနေတယ် ခေတ်ဆန်ပီးရှိသမျှဖော်ပြနေမှ ဝိုင်းပြစ်မှားခံနေရတဲ့Facebook နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်နေတာလား ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေက အပြင်သွားလာတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်မှာရော လုံခြုံမှူ့ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါသလားကွယ်ရာကလေ ပစ်မှားဖို့ပြစ်မှားဖို့ချောင်းနေတဲ့ ပုရိဿယောကျာ်သားတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေတယ် မြန်မာဆန်ဆန် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ … Read more
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့…… “Facebook သုံးရင်ဒါတွေသတိထားပြီးရှောင်စေချင်ပါတယ်” (၁)ပုံတွေခဏခဏ မတင်ပါနဲ့ပုံတွေ ခဏခဏတင်ရင် လူတစ်ချို့က ကိုယ့်ကိုတစ်မျိုးမြင်လာနိူင်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ လူမှုရေးပြဿ နာ တွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ (၂)အပျော်သဘောနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ status တွေသိပ် မတင်ပါနဲ့Facebook ဆိုတာ များသောအားဖြင့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်မြင်ဖူးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခင်မင်နေခြင်းဖြစ်၍လူတွေရဲ့စိတ်ကို ကိုယ်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေကြည့်ပြီး တန်ဖိုးသတ်မှတ်နေကြတာဖြစ်လို့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ (၃)ကိုယ်ရေးတဲ့ comments တွေကို သတိထားပါလူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှာ ပညာအရည်အချင်း ၊ ချောမောလှပမှုရာထူးစည်းစိမ်တွေ မဟုတ်ဘဲ နုတ်ထွက်စကားဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ်က စနှောက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆဲပါမှ ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေက ကိုယ့်ကို အထင်သေးသွားတတ်ပါတယ်။ (၄)ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်တွေကို ကလေးဆန်ဆန်ခဏခဏ postတင်တာ သတိထားပါ။ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က သူရေးချင်တာရေးတာကိစ္စမရှိပေမယ့် … Read more
Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ သူ့ချစ်သူမှန်း ကိုယ့်ချစ်သူမှန်း မသိဖြစ်လာတယ် သစ္စာတရား ကင်းမဲ့လာတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်လာတယ်။အိမ်ထောင်သယ်တွေကအပျို လူပျို လုပ်လာတယ် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ကျောင်းကန်အရောက်နဲလာတယ် စကားတွေမပီကလာပီကလာပြောမှ ခေတ်မှီတယ်အသိနဲ့ သွားကျိုးကြားကလေထွက်သလို စကားကိုမပီအောင် တမင်လုပ်ပြောလာကြတယ်… Post တင်တဲ့အခါ တင်တဲ့Postကို အသေအချာမဖတ်ပဲ ပါးစပ်အရသာခံ ချောချော မချောချော အသားယူပြောတဲ့သူတွေပေါလာတယ် လူတက်ကြီးလုပ်ပီး အကြံပေးသလိုလိုနဲ့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေပေါလာတယ် ရေးချင်တာတွေရေး postမှာ like mentရရေး အောက်ကျခံ ခင်ရင် postသစ်လာပါဦး ဆယ်လီဖြစ်ချင်ဇောတွေ များလာတယ်… အိနြေ္ဒရှင် တည်ငြိမ်သူတွေ Fbပေါ် ခေတ်နောက်ကျတယ်ဖြစ်လာကြတယ် သစ္စာတရား တန်ဖိုးထားသူတွေ ပြတိုက်ရောက် ဘဝတန်ဖိုးထားသူတွေ အပစ်ခံရ feel ပို့စ်မရှိ ပို့စ်မှာ like နဲသူတွေ ဒိတ်အောက်တယ်ဖြစ်ကြရတယ် အိမ်တွင်းရေး … Read more
မုဆိုးဖို၊မုဆိုးမ ဖြစ်နိုင်သူတွေမှာ ပါရှိတတ်တဲ့ လက္ခဏာများ လောကမှာ ချစ်ခြင်းနှင့်အစတည်လာခဲ့တဲ့ သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဟာ တစ်နေ့တော့ အိမ်ထောင်ပြုလို့ မိသားစုဘဝကို တည်ဆောက်ပြီး သား၊မြေတွေရတဲ့ အထိ ရိုးမြေကျ အဖိုးကြီး၊အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ နေထိုင်လိုကြတာဖြစ် တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ရည်မှန်ပြီး ကိုယ်အလွန် ချစ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ရဖို့ ဘဝအခက်အခဲများစွာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး စွန့်စားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုအချစ်ရဲ့အားတွေ၊သတ္တိတွေနဲ့ တူနှစ်ကိုဘဝလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်က လူ့လောကကြီးကနေ မိမိကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်း ကြေကွဲဖို့ ကောင်းလိုက်မလည်း။ ဒီလိုထွက်ခွာသွားလို့ မိမိမှာ သူမရှိတော့တဲ့နောက် တစ်ကိုယ်တည်း မုဆိုးဖို-မုဆိုးမ ဘဝနဲ့ ဘဝခရောင်းလမ်းကို ဖြတ်ရတဲ့အခါ ဘယ်လောက်များ ကြေကွဲဖို့ကောင်းလိုက်လေမလည်း အဖော်မဲ့ပြီး လောကဒဏ်ရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုတမ်းတလို့ မျက်ရည်တွေနဲ့ တိပ်တခိုးငိုနေရတဲ့ ဘဝတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လောကမှာ … Read more